Soavaly azo zahana Breyer Brand | Soavaly Noti
Soavaly Breyer azo angonina
Breyer dia orinasa amerikana, teraka manokana any Chicago, natokana ho an'ny fanamboarana sarin-tsoavaly azo angonina. Ireo dia vita amin'ny resina, ary nolokoina tamin'ny tànana, noho izany dia samy hafa amin'ny soavaly teo aloha ny soavaly tsirairay. Ho fanampin'izay, izy dia iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra mivarotra an'ity kilasin'ny vokatra ity, miaraka amin'i Schleich sy ny fanangonany tarehimarika.
Samy manana soavaly izy ireo, toa Accessories: manomboka amin'ny lamba firakotra, hatramin'ny bodofotsy, lamboridy, seza, borosy ... Ankoatra ny fivarotana milentika mitsambikina, andrefana sns. Ho an'ireo tarehimarika, dia manavaka ny refy mahazatra amin'ny mizana 1: 9, sy ireo refy mahazatra 1:12. Izy ireo koa dia manana soavaly misy elatra, boky fandokoana, soavaly soavaly ary ny bokiny (toa Black Beautyna Hatsaran-tarehy mainty), biby tototry, boky bebe kokoa; zavatra maro izay hahatonga ny ankizy sy ny mpitaingin-tsoavaly olon-dehibe ho lasa adala. Manome anao izy ireo hiditra amin'ny azy ireo Club collector, izay isaky ny vola isan-taona dia hanome anao fotoana ahazoana fihenam-bidy sy loka marobe, ankoatry ny hafa. Saingy tsy vitan'ny manana karazana firazanana samy hafa izy ireo, toa ny Hanoverians, Pintos na Appaloosas, fa izy ireo koa dia manana fanehoana tsara amin'ny marika famantarana soavaly lehibe toa an'i Totilas, Secretariat, Zenyatta, Hickstead ary maro hafa; na soavaly taonan'ny taona 2014 aza.
Orinasa nivelatra izy ary androany fanondranana ny vokatra vokariny amin'ny alàlan'ny orinasa faharoa ao: Canada, Russia, Italia, France, Greece, Australia, New Zealand, Mexico, Hungary, Kazakhstan, Ukraine, South Africa ary mazava ho azy Spain. Amin'ity tranga manokana ity dia hitako tamin'ny fikarohana haingana tao amin'ny Google fa amidy any Hipisur, Central Hípica, Hipican ary On Horse 13 izy ireo; Hispano Hípica no mpanafatra ny vokatra ofisialy, izay afaka mizara azy io araka ny sitrapony.
Ny hevitro momba ilay vokatra: Novidiko ny Hanoverianina hitanao amin'ny sary ao amin'ny magazay iray eo an-toerana, nohafarana avy amin'i Hispano Hípica, ary tokony hiteny aho fa faly be. Ny soavaly dia tsara tarehy, manjelanjelatra, tena misy ary tena vita tsara. Ho fanampin'izay, ny vidiny dia tsy avo, raha jerena ny asa omena azy ireo (€ 14,99). Na dia izany aza dia eo amin'ny tarehimarika 1:12, satria ny isa maridrefy 1: 9 dia lehibe kokoa sy lafo kokoa (tsy lazaina intsony ny fampisehoana soavaly malaza). Ny olana dia raha mila vokatra tsy hitanao any Espana ianao, dia lafo tokoa ny vidin'ny fandefasana entana amin'ny baiko iraisam-pirenena (manodidina ny € 50, na dia miankina amin'ny vidinao aza izany); Na izany na tsy izany, azonao atao ny manandrana mifandray amin'i Hispano Hípica foana raha hahitan'izy ireo izany ho anao. Ny zavatra iray nahasarika ny saiko dia ny fonosany: tena nostalgic io. Nampahatsiahy ahy ny kilalao hatramin'ny fahazazako izany, ary tariby mitazona azy io. Raha fintinina, vokatra tsara ho an'ny mpanangona sy ny zaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » About us » Soavaly Breyer azo angonina
Ilay soavaly miorim-paka sy ireo zava-dratsy (II): miketriketrika